अभावले जोडेको सम्बन्ध - युवा मन - प्रकाशितः मंसिर २९, २०७३ - साप्ताहिक
म ती दिनहरूमा अप्ठेरोमै थिएँ । आर्थिक रूपमा । तिनै अप्ठेरा दिनहरूमा मसित एक जना साथीले रिन मागिदिए । जोगीको घरमा संन्यासी पाहुना भनेझैँ स्थिति पैदा भयो । म आफैँ समस्यामा थिएँ । मैले ढिला गरिनँ उनलाई यो सुनाउन । उनले पनि ढिला गरेनन्, आफ्नो समस्याको विस्तृत विवरण खुलाउन। उनको समस्या सुनिसकेपछि प्रस्ट भो, हामी दुवैको उस्तै हाल थियो, तर उनको समस्या मेरो भन्दा अलिक विकराल थियो । मैले आफ्नो समस्या उनलाई सुनाइनँ । साथी हुन्, बेलामा काम आउन सकिनँ भने उनी पनि मलाई परेका बेला कसरी काम आउलान् ? यहि सोचेर, जे–जति सम्भव थियो जुटाएर उनलाई दिएँ । आफ्नो गोजी टकटक्याएर दिएँ । मित्र खुसी भए । म झन् खुसी भएँ । कसैबाट केही सित्तैँमा पाउनुले भन्दा कसैलाई केही दिनुले बडो आनन्द दिन्छ । म त्यो आनन्दलाई जाडोयाममा तापिने घामझैँ तापिरहेको थिएँ । तर मैले तापिरहेको आनन्दमा नमीठो सिरेटोले तब हान्यो जब मैले थाहा पाएँ कि मित्रले ठाउँ–ठाउँमा मेरा बारेमा मसँग प्रशस्त पैसा छ भन्दै हिँडेछन् । मैले अकुत कमाएको छु । भएर त दियो । टन्नै छ र त दिन सक्यो ।
कसैको एउटा काम आउन आफ्नो अनगिन्ती निद हराम भएको हुन सक्छ । कहिलेकाहीं कसैको इच्छा पूरा गरिदिन खोज्दा आफ्ना रहरहरू अधुरा भैदिन्छन् । मान्छेले यो कहिल्यै बुझ्दैन ।कसैले भएर दियो भन्न सक्नेले किन यो भन्न सक्दैन कि नभएर दिन सकेन ? सयौँ गुन लगाउनुस्, मान्छेले तुरुन्तै बिर्सिन्छ । एक बैगुन, चाहे त्यो झुक्किएरै किन नलागेको होस्, सधैँ बिझिरहन्छ । चन्द्रमालाई दागसहित स्विकारेर सुन्दर भन्न सक्ने समाज मान्छेलाई एकाध बैगुनसहित स्वीकार गर्न किन सक्दैन ?
सम्बन्ध सामान्य छ
यो सम्बन्ध कायम रहँदा श्रीमतीसँगको सम्बन्ध थप बिग्रने र डिभोर्स हुने हो कि ?
बाहिरी व्यक्तिसँगको यौनसम्बन्धलाई के भन्ने